Atonement (2007) | MM Movie Store
James Mcavoy ,Keira Knightley, Lady Bird (ဝါ) Saoirse Ronan နဲ့ Benedict Cumberbatch တို့လို နာမညျကွီးမငျးသားမငျးသမီးတှေ အစုံအလငျနဲ့ရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားပါ။အဆုံးသတျ မတိုငျခငျ အထိတော့ ဒီ ဇာတျလမျးလေး တဈပုဒျလုံးက သိပျမထူးခွားသလိုပါပဲ။
ဒီဇာတျလမျးရဲ့ ထူးခွားခကျြကို ကြှနျတျော ခရြေးခဲ့ရငျလညျး spoil ပွီးသား ဖွဈသှားပါမယျ။အခြိနျကာလအားဖွငျ့ Dunkrik မဖွဈမှီ….. အထကျတနျးလှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့ အိမျဖျောတဈယောကျရဲ့သား…..ခဈြကွိုကျမိခဲ့ကွတယျ…။ မှားယှငျးသှားတဲ့ စာတဈစောငျက မထငျမှတျပဲ ယူလာခဲ့တဲ့ ဂွိုလျဆိုးတှကွေားမှာ..သူတို့ ဝေးသှားခဲ့ကွတယျ…။
စဈတပျထဲ ရောကျနတေဲ့ ကောငျကလေးနဲ့… အိမျကနေ ပွေးထှကျခဲ့တဲ့ ကောငျမလေး.. စဈမထှကျမှီမှာ ပွနျတှကွေ့တဲ့အခြိနျ… နသော လလောမဲ့ တဈနတေ့ော့ကို သူတို့ ပွနျ ယုံကွညျမြှျောလငျ့ခဲ့ကွတယျ…။
စဈရဲ့ အနိဋ်ဌာရုံတှကွေားကနေ ဒဏျရာအထပျထပျနဲ့ မြှျောလငျ့နတေဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျနဲ့ အခဈြအတှကျ အရာရာကို ကြောခိုငျးခဲ့တဲ့ လူကုံထံ မလေးတဈယောကျရဲ့ယုံကွညျ..မြှျောလငျ့ခွငျးတှေ…. သူတို့ အတူနခေငျြခဲ့ကွတဲ့ ကမျးခွေ ဘေးက အိမျကလေးတဈလုံးမှာ ပွနျဆုံတှကွေ့မဲ့ တဈနနေ့ေ့..
အဆုံးသတျမှာ ဘာတှမြေား ဖွဈသှားသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယျတိုငျပဲ စီးမြောကွညျ့ကွပါ။အျောစကာ Nomi အတျောဝငျထားပွီး Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score ဆုလညျးရထားတဲ့အပွငျ တခွားက ဆုတှလေညျး အတျောရထားတဲ့ ကားပါ။
James Mcavoy ,Keira Knightley, Lady Bird (ဝါ) Saoirse Ronan နဲ့ Benedict Cumberbatch တို့လို နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေ အစုံအလင်နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။အဆုံးသတ် မတိုင်ခင် အထိတော့ ဒီ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်လုံးက သိပ်မထူးခြားသလိုပါပဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ကျွန်တော် ချရေးခဲ့ရင်လည်း spoil ပြီးသား ဖြစ်သွားပါမယ်။အချိန်ကာလအားဖြင့် Dunkrik မဖြစ်မှီ….. အထက်တန်းလွှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ရဲ့သား…..ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ကြတယ်…။ မှားယွင်းသွားတဲ့ စာတစ်စောင်က မထင်မှတ်ပဲ ယူလာခဲ့တဲ့ ဂြိုလ်ဆိုးတွေကြားမှာ..သူတို့ ဝေးသွားခဲ့ကြတယ်…။
စစ်တပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကောင်ကလေးနဲ့… အိမ်ကနေ ပြေးထွက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး.. စစ်မထွက်မှီမှာ ပြန်တွေ့ကြတဲ့အချိန်… နေသာ လေလာမဲ့ တစ်နေ့တော့ကို သူတို့ ပြန် ယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်…။
စစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေကြားကနေ ဒဏ်ရာအထပ်ထပ်နဲ့ မျှော်လင့်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ အချစ်အတွက် အရာရာကို ကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ လူကုံထံ မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်..မျှော်လင့်ခြင်းတွေ…. သူတို့ အတူနေချင်ခဲ့ကြတဲ့ ကမ်းခြေ ဘေးက အိမ်ကလေးတစ်လုံးမှာ ပြန်ဆုံတွေ့ကြမဲ့ တစ်နေ့နေ့..
အဆုံးသတ်မှာ ဘာတွေများ ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီးမျောကြည့်ကြပါ။အော်စကာ Nomi အတော်ဝင်ထားပြီး Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Score ဆုလည်းရထားတဲ့အပြင် တခြားက ဆုတွေလည်း အတော်ရထားတဲ့ ကားပါ။